10 Isbedelada Ecommerce Waxaad Arki Doontaa Iyadoo Laga Hirgaliyay 2017 | Martech Zone
Ma ahayn waqti aad u fog ka hor in macaamiisha aysan runtii ku raaxeysanayn gelitaanka xogtooda kaararka deynta ee internetka si ay wax u iibsadaan. Iyagu ma ay aaminin goobta, ma ay aaminin bakhaarka, mana ay aaminin rarka… wax uun kuma ay aaminin. Sannado ka dib, in kastoo, iyo celceliska macaamilku uu samaynayo in ka badan kala badh dhammaan iibsiyadooda internetka!
Waxaa ku weheliya dhaqdhaqaaqa wax iibsiga, xulasho aan caadi aheyn oo ka mid ah meheradaha ganacsiga, soo-saaris aan dhammaad lahayn oo ka mid ah goobaha wax lagu qeybiyo, iyo caqabad xagga hoose ka soo gasha oo laga galo ganacsiga ayaa cirka isku shareeraysa xagga casriga iyo koritaanka. Adoo maskaxda ku haya, waa muhiim inaad dhayalsato sida aad ugu kala duwanaan laheyd dukaankaaga internetka.
SSL2Buy, Bixiye caalami ah oo SSL ah, ayaa la yimid toban isbeddel eCommerce ah si loo daawado 2017 oo lagu soo ururiyey sawirkan quruxda badan:
Dhamaadka Jimcaha Madow iyo Cyber ​​Isniinta - Maaddaama aadan u baahnayn inaad ka tagto sariirtaada oo aad ku dagaallanto safafka, ecommerce waxay yareyneysaa saameynta maalmahan iibka iyo dabeecadda wax iibsiga ayaa ku faafaya dhammaan bisha Cyber ​​Nofeembar.
Khibrado Shopping Shakhsiyadeed oo Dheeraad ah - barnaamijyada raadraacaya go'aammada iibsiga iyo dabeecadaha ayaa ugu dambeyntii sax ah waxayna ka caawin karaan dukaamada internetka inay bixiyaan dabeecado shakhsi ahaaneed oo yareeya iibsiga khilaafaadka iyo bixinta talooyinka wax soo saarka ee iibsadayaashu runtii rabaan.
Macaamiisha ayaa la falgalaya Sirdoonka Artifishalka - Dukaameysiga, ballansashada, iyo sheekeysiga adeegga macaamiisha waxay si sax ah oo hufan uga jawaabi doonaan su'aalaha wax ka iibsiga khadka tooska ah, hagaajinta khibradda ganacsiga, kaqeyb gelinta adeegsadayaasha, waxayna ku kaxeynayaan inay kordhiyaan qiimaha alaabada wax lagu iibsado iyadoo la yareynayo ka tagista.
Si sax ah u saadaalinaya Iibsiga Xiga ee Macaamiisha - Awoodda uruurinta iyo falanqaynta xogta waaweyni waxay siineysaa saadaalin heer sare ah iyo moodello saadaalin ah oo loo adeegsanayo in dalabyada la hor dhigo macaamilka xilligan ay u baahan yihiin.
Ka dhig khibradda moobiilka sida ugu wanaagsan ee suuragalka ah - Mobaylku wuxuu dhaafiyey desktop-ka dadka wax iibsada ee khadka tooska ah ka baaraya kana baaraan degaya go'aankooda soo socda Google waxay siineysaa tusmo gaar ah mobilada ubaahan ganacsiyada inay qaadaan talaabada ugu horeysa ee mobilada si loo wanaajiyo goobahooda e-commerce.
Kordhinta bixinta isla maalin ah - 29% macaamiisha ayaa sheegay inay ku bixin doonaan lacag dheeri ah isla maalintaas bixinta. Layaab malahan sababta hogaamiyeyaasha sida Amazon ay u keeneen adeegga suuqa, iyagoo sii yaraanaya baahida loo qabo booqashada dukaanka tafaariiqda ee ugu dhow.
Iibinta bulshada - 70% macaamiisha waxaa saameyn ku leh noocyada iyo talooyinka wax soo saarka ee ku saabsan warbaahinta bulshada Taabashada warbaahinta bulshada si loo kordhiyo wacyiga sumcadda iyo u doodisteeda ayaa hadda wadata iibka, waxayna ku dhiirrigelineysaa suuqleyda inay horumariyaan istiraatiijiyado bulsheed oo omni-channel ah
HTTPS loo baahan yahay Sanadka 2017 - Haddii uusan lahayn xiriir SSL, macaamiisha iyo bixiyeyaasha ecommerce waxay u nugul yihiin helitaanka xogta la xado ama nidaamyada la jabsado. Google ayaa horeyba u xaqiijisay SSL in lagu soo rogay algorithms darajayn, waa waqtigii la sugi lahaa goob kasta oo aad haysato oo xogta lagu uruurinayo ama la marinayo
Iibinta omni-channel - Dadka wax iibsada ee Multichannel waxay ku qarashgareeyaan in ka badan 3 jeer wax ka badan iibsadaha hal-kanaal oo u baahan suuqleyda inay horumariyaan ololeyaal adag oo raacaya kuwa wax iibsanaya isla markaana u horseedaya iibsi haddii ay ku jiraan dukaanka, moobiilka, ama meel kasta oo u dhexeysa.
Dib u qiimeynta alaabta - Celcelis ahaan, waxay u baahan tahay toddobo qodob oo taabasho ah ka hor intaadan dib ugu celin hoggaamiye iibsade Dib-u-iibintu hadda waa istiraatiijiyad muhiim u ah suuq kasta oo ganacsi.
Hubso inaad tixgeliso isbeddelladan muhiimka ah inta aad abuureyso istaraatiijiyada suuq geynta ecommerce waayo, 2017.
Tags: sirdoonka macmalxog weynjilicsan madowduubka internetkagaarsiintadukaamaysiga firfircoone-commerce infographicisbeddelada ecommercehttpsinfographicdukaamaysiga mobiladakombiyuutarka omnichanneliibinta omnichanneldib u soo kabashadaisla maalin gaarsiintaganacsigaiibinta bulshadamaraakiibtashoppingkhibradda wax iibsigaganacsiga bulshadaganacsiga bulshadaiibinta bulshadassl
10 Isbeddellada Macaamiisha ee 2017… Digniin Digniin Ah!